Ronaldo oo wajahaya ganaax culus & Laacibitiinta kala ah Messi, Luis Figo oo war culus kasoo saaray + Xiisadii… – Puntlandtimes
Ronaldo oo wajahaya ganaax culus & Laacibitiinta kala ah Messi, Luis Figo oo war culus kasoo saaray + Xiisadii…
NAIROBI(P-TIMES)- Cristiano Ronaldo ayaa wajahaya ganaax la mid ah midkii la dul dhigay tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone, kaddib markii uu sameeyay dabaal deg la mid ah midka macalinka reer Argentina.
Dhanka kale halyeygii xulka qaranka Portugal iyo sidoo kale kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee Luis Figo ayaa wuxuu xaqiijiay in Los Blancos aysan buuxin karin booska uu kaga baxay Cristiano Ronaldo.
Figo ayaa tilmaamay inay suuragal tahay in kooxda Real Madrid ay u baahato xoojinta booska uu kaga baxay Cristiano, balse wuxuu dhinaca kale xaqiijiyay sida ay u adag tahay in la helo ciyaaryahan la mid ah Ronaldo.
“Cristiano Ronaldo lama buuxin karo booskiisa Real Madrid, waa suuragal in kooxda ay u baahato xoojinta safkeeda, marka ay waayaan ciyaaryahan muhim ah, laakiin ma jirto ciyaaryahan ku sugan suuqa ee buuxin kara booskiisa”.
Intaas kadib Luis Figo ayaa wareysigan uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay da’ayarka reer Brazil ee Vinícius Júnior wuxuuna yiri:
“Waa ciyaaryahan muhim ah, lakiin dhab ahaantii wuxuu u baahan yahay waayo-aragnimo dheeraad ah ee ku aadan goolka hortiisa”.
Si kastaba Cristiano Ronaldo ayaa kula qaadanaya wakhtigiisii ugu fiicnaa ee xili ciyaareedkan kooxdiisa Juventus ee dalka Talyaaniga, wuxuuna ku guuleystay in Bianconeri uu u gudbiyo wareega sidddeeda ee tartanka Champions League, kadib saddexleydii uu kaga dhaliyay Atletico Madrid kulankii lugta labaad ee wareega 16-ka.
Ugu dambeyntii xiddiga Kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa kooxdiisa Barcelona u dhaliyay 2 gool sidoo kale caawiye ka noqday 2 kale kulankii ay Barcelona garaacday kooxda Lyon.
Laakiin xiddiga reer Argentine ayaa amaanay xiddiga ay sida weyn u xafiiltamaan ee Cristiano Ronaldo kaas oo ku sheegay in uu soo qaatay todobaad cajiib ah.
Xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyay saddexley kulankii ay kooxda Juventus garaacday Atletico Madrid uguna soo baxday wareega 8 dhamaadka tartanka champions League.
Kadib kulankii Lyon ayaa Leo Mess wax laga waydiiyay qaab ciyaareedkii xiddiga ay sida weyn u xafiiltamaan ee Salaasadii.
“Wixii ay Cristiano Ronaldo & Juventus sameeyeen waxa ay ahaayeen wax cajiib ah”ayuu Yidhi ciyaarta kadib.
“Waxa aan filayay in ay Atletico Madrid adkaan doonto”.
“Ronaldo waxa uu soo qaatay Habeen sixir leh oo uu dhaliyay 3 gool”.